OnePlus wuxuu ku shaqeyn doonaa smartwatch -kii ugu horreeyay | Androidsis
Noocyo aad iyo aad u badan oo taleefannada Android ah ayaa leh saacado u gaar ah. Xiaomi waa tusaale wanaagsan oo tan ah, kaasoo saacado yar gudahood inaga tagi doona saacaddiisa. In kasta oo nooca Shiinaha uusan noqon doonin midka kaliya, maxaa yeelay waxaa jira noocyo kale oo horay uga shaqeynayay smartwacht-kooda, sida ay tahay kiiska OnePlus. Tani waa waxa ay ka yiraahdaan warbaahinta kala duwan.
Sida la bartay, OnePlus ayaa hadda horumarin lahayd smartwatch-keedii ugu horreeyay, oo loo qorsheeyay 2020. Saacad ay shirkaddu rajeynayso inay la istaagto noocyada sida Xiaomi, Huawei ama Samsung qaybtan suuqan ah. Siideyn aad u xiiso badan.
Ku saabsan saacaddan oo horumarin laheyd hadda wax xog ah lama hayo. Ma garanayno haddii OnePlus uu ku sharaddo inuu adeegsado Wear OS-ka, taas oo noqonaysa ikhtiyaar u siin karta nidaamkan hawlgal riix cusub, ama haddii ay isticmaali doonaan nidaamkooda ama mid ka duwan. Naqshadeynta waxba lagama oga.
Smartwatch-kan ayaa la filayaa inuu rasmi noqdo sanadka 2020. Sumadda Shiinaha ayaa soo bandhigi doonta jiilkeeda soo socda ee taleefannada guga sanadka soo socda. Warbaahinta ka hadasha jiritaanka saacadan ayaa soo jeedineysa inuu suuqa ku gaari doono taleefanadan kala duwan.
Shirkaddu ma xaqiijinin wax ku saabsan jiritaanka saacaddan. Waxay noqon kartaa mid xiiso leh waxa OnePlus waa inuu ku bixiyaa qaybtan suuqan ah. Shirkaddu waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan dhamaadka-sare ee Android waxayna hadda ku dhiirradeen inay bilaabaan telefishanka. Smartwatch waa tallaabo kale oo aad ku kala duwanaan karto.
Waxaan noqon doonaa dhegeysi war dheeraad ah oo ku saabsan soosaarka OnePlus, sida saacadan durba loogu yeedhay warbaahinta kala duwan. Maaddaama ay weli in yar ka yar tahay nus-sano illaa qalabkani uu gaadho suuqa. Marka waqtigan, warar badan oo cusub ayaa laga yaabaa inay yimaadaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » OnePlus » OnePlus wuxuu ku shaqeyn karaa smartwatch